Ngakho, mina nodadewethu othile saba ngabalingani ngokomsebenzi saqala ukwenza ndawonye umsebenzi wobufundisi ebandleni. Kodwa kancane kancane, ngabona ukuthi wayengenzi zonke izinto njengokwentando yami, kwaqala kwaba nokuphikisana enhliziyweni yami: Yize noma ngiba matasatasa uma ngisebenza ngedwa, kulungile, vele ukuhlela ukuba nomlingani engisebenza naye kuzoba nokunenga. Uma ngimyeka enze umsebenzi othile bese kungabi yinto efanelekayo, kusho ukuthi kungangcono ngizenzele mina ngokwami. Uma ngingamyeki enze umsebenzi, empeleni, ungumlingani wami. … Ngakho, kwaya ngokuya kwanda ukuqophisana enhliziyweni yami, kwaze kwaba yisikhathi lapho, ngangingasakwazi ukuzibamba futhi ngamthukuthelela: “Ungaba kanjani yisiphukuphuku kangaka? Ube umholi iminyaka eminingi, kwenzeka kanjani ukuba namanje awukakwazi ukwenza umsebenzi omuhle? Yini ungakwazi ukuqonda, noma ukuphendula? …” Emva kokuba sengiqedile, angizizwanga kahle neze, empeleni ngalahlwa unembeza. Ngazicabangela ngathi: Ingabe isimo sami silungile? Ngakho ngeza phambi kukaNkulunkulu ngifuna, ngase ngibona amazwi kaNkulunkulu ayethi: “Okufunwa kinina namuhla—ukusebenza ndawonye ngokuzwana—kuyafana nenkonzo uJehova ayeyifuna kuma-Israyeli: Kungenjalo, yekani nje ukukhonza. Ngenxa yokuthi ningabantu abakhonza uNkulunkulu ngokuqondile, okungenani kufanele nikwazi ukwethembeka nokuthoba ekukhonzeni kwenu, futhi kufanele nikwazi nokufunda izifundo ngendlela engokoqobo. … Anizifundi nakuzifunda noma ningene kulezi zinhlobo zezifundo zokoqobo, kodwa nisakhuluma ngokukhonza uNkulunkulu! … Uma omunye engafundi komunye, nisizane, futhi nelekelele lapho omunye wenu ebuthakathaka khona lapho nenza umsebenzi emabandleni, ningazifunda kanjani-ke izifundo? Noma nini lapho nihlangana noma nayiphi into, kufanele nihlanganyele nabanye ukuze izimpilo zenu zizuze” (“Khonzani Njengoba Kwakwenza Ama-Israyeli” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngabe sengibona lokhu entshumayelweni: “Kunabanye abantu abangakwazi ukusebenzisana nabanye ngenkathi begcwalisa umsebenzi wabo. Akunamuntu okwazi ukusondela eduze kwabo; lokhu kukhombisa ukuzazi nokuqhosha kwabo, ukuthi abanabo nobuncane ubuntu nomqondo, abaziqondi, futhi babukela phansi abanye. Ingabe lokhu akudabukisi? Isimo salolu hlobo lwabantu asishintshi nhlobo, futhi akulula ukusho ukuthi bangasindiswa na nguNkulunkulu. Abantu abazazi ngempela bayakwazi ukuphatha abanye abantu ngendlela elungile nangaphandle kokugxeka okwedlulele. Bangakwazi futhi nokweseka abanye ngesineke, benze abantu bazizwe bebalulekile futhi bethandeka; bangaba nobudlelwane obuhle nabanye. Bangabantu abanobuntu, futhi ukuphela kwabantu abanobuntu abanokuzinikela kuNkulunkulu, abakwazi ukuphila ngoxolo nabanye abantu, futhi bagcwalise ngokufanele ezabo izibopho” (Encwadini ethi Ukuhlanganyela Okuvela Kongaphezulu). Kulawo mazwi kaNkulunkulu kanye nalokhu okuvela entshumayelweni, ngazihlolisisa ngokuqikelela ngase ngibona ukuthi ngangingakayiqondi intando kaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu ekuhleleni abalingani bazo zonke izigaba zabaholi. Phezu kwalokho, ngangingakaqali ukusebenzisa noma ukungena eqinisweni lokubambisana ngoxolo. Esinye sezizathu zokusihlelela kwendlu abalingani bokusebenza nathi endlini kaNkulunkulu kungenxa yokuthi imimoya yethu iphansi kakhulu, futhi ukuqonda kwethu wonke amaphuzu eqiniso nakho kukhawulekile. Asikwazi ukuthatha wonke umsebenzi ebandleni sodwa. Ngosizo lomlingani wami, singakwazi ukuphothula umsebenzi webandla. Esinye isizathu ukuthi imvelo yethu inokuzithwala kakhulu, okusibeka esimweni sokuthi sifuna ukuba namandla futhi sibe nezwi elingaphikiswa ezintweni. Ngokubhekwa nokuthitshwa ngumlingani, lolo hlobo lokusebenza olunesandla esilukhuni, esingacopheleli, esinobudlabha esingalimaza umsebenzi webandla lungagwemeka. Singakwazi kangcono futhi ukungena eqinisweni lobuntu obujwayelekile, ukuze sikwazi ukuba nokuhlanganyela okufanayo nabalingani esisebenza nabo, futhi sifunde omunye komunye. Lokhu kunomvuzo omkhulu emsebenzini webandla kanjalo nasempilweni yethu yokungena. Lokhu kwangenza ngabona ukuthi ukusebenzisana ngoxolo emsebenzini wethu kubucayi kakhulu emsebenzini webandla kanye nesekungeneni kwethu empilweni! Kodwa ngangingakafuni intando kaNkulunkulu nhlobo kulokhu. Nganginganakanga ukuthi yiziphi izifundo zangokoqobo engangingazifunda ngalokhu kubambisana. Ngavele nje ngokunqikaza ngasebenza naye ngenxa yezinhlelo zebandla, futhi kwathi nje lapho udade ehluleka ukubhekana kahle nezinto ezimbalwa, ngamthethisa ngamthukuthelela. Vele ngangilokhu ngicabanga ukuthi wayengakwazi ukusebenza kahle njengami, futhi angibonanga amaphuzu awenza kahle nokuhle ngaye. Ngaze ngaphikisana nohlelo lwebandla. Impela ngangizithwele, ngingaziboni nhlobo, futhi ngangingenabo nobuncane Ubuntu noma ukucabanga ngokujwayelekile, futhi nakakhulu ngangingenayo inhliziyo ethobele uNkulunkulu, futhi ngingafanelekile nokusebenza phambi kukaNkulunkulu.
Okwedlule: UMoya oNgcwele Usebenza Ngendlela Enemigomo